Blade Runner: Peni nePepa ine hutsinye hwekuunganidza vanhu mari - Spielpunkt - Bhodhi neMitambo yeVhidhiyo
Muparidzi Fria Ligan (Ligi Yemahara) yakatanga mushandirapamwe wayo wekuunganidza mari yepeni nebepa shanduro yeBlade Runner paKickstarter. Nekubudirira kukuru kubva pakutanga: chinangwa chemari chakasvika mukati memaminetsi matatu. Zvichakadaro, vateveri vakapomba mari inodarika hafu yemiriyoni muchirongwa ichi.
Iyo Blade Runner peni uye bepa-yekutamba-mutambo mutambo watove kudzingirira marekodhi nguva pfupi yatanga paKickstarter. Vanenge zviuru zvitanhatu zvevateveri vakakwidza zvinodarika zviuru mazana mashanu emaeuro nguva pfupi yapfuura pfuti yekutanga kuita kuti chirongwa ichi chibudirire pakutanga. Iko kuunganidzwa kuchaenderera kweanenge mavhiki matatu - imwe kana imwe rekodhi inogona kutyorwa.
Neon Noir RPG ine classic theme
Vatambi vanofanirwa kugadzirira blasters yavo nekuti Yemahara League Publishing's BLADE RUNNER: MUTAMBO WEKUTEVEDZERA Mutambo weKickstarter unotsigirwa zvizere.
Yakavhoterwa #1 Yakanyanya Kutarisirwa Kutamba Mutambo WeGore neEN World, iyo RPG mushandirapamwe yakatangwa uye yakapfuura chinangwa chayo chemari mukati memaminitsi ekutanga - ikozvino zvakanyanya. Mutambo wekutamba wave kuda kusvika pazvinangwa zvakatambanudzwa zvakawanda sezvinobvira, sekuwedzera zvemukati zveyekutanga seti yemitemo uye zvishongedzo zvemitambo zvakaita semadhaisi ega ega, makadhi uye zvinopihwa zvekutanga seti.
Vese vanotsigira vanozogashirawo PDF vhezheni yeCASE FILE 01: Magetsi Zviroto - yekutanga yepamutemo cinematic module yeBLADE RUNNER RPG. Yekutanga, yekuferefeta yakamonyoroka paMahara League yekuhwina mubairo-mubhaisikopo modhi, Blade Runner Case Mafaira itsamba yerudo kumitambo yakavanzika yakare seSherlock Holmes: Consulting Detective. Iyo inoburitsa yakazara-yakareba mamiriro ane pre-yakagadzirwa mavara uye zviitiko.
Kune zvakare masumbu akasiyana, rimwe nerimwe riine michina yakasiyana. Iyo Kickstarter campaign ye Peni uye Pepa paBlade Runner inoenderera kusvika May 26th.
Kare Barrier-yemahara bhodhi mutambo anotsanangura mavhidhiyo: Sangano rinotangisazve chirongwa
Inotevera Star Wars Tag: 5 yakanaka Star Wars bhodhi mitambo
Nintendo arikupemberera zuva rekuzvarwa kwaSuper Mario nezvinhu uye zvinounganidzwa
Hargrave's new board game Mariposas semutsivi weFlügelschlag
Kuparadzana: Private Division yekutanga-munhu kupfura kuvhura turera yakaburitswa